Ngaphandle kwamathandabuzo, iimaski zobuso zidlale indima ebalulekileyo kumlo wethu ngokuchasene ne-COVID-19. NgoJanuwari, xa imeko yayimbi, abantu kulo lonke iTshayina baqala ukunxiba imaski ngobusuku. Oko, kudityaniswa namanye amanyathelo, kuncede ukumisa i-COVID-19 ukuba ingasasazeki.
Isizathu sokuba wonke umntu egxile kwimaski kukuba ziyasebenza, kwaye indlela elula yokuyiqinisekisa kukugada ukusasazeka kwale ntsholongwane.
xa undwendwela iindawo ezinabantu abaninzi ezinje ngeebhasi okanye iirifeli, xa umntu egula, okanye xa etyelele izibhedlele, abantu kufuneka banxibe imaski yobuso. Kwelinye icala, ukuhlamba izandla rhoqo, ukubulala iintsholongwane izinto zemihla ngemihla emva kokuchukumisa, kunye nokugcina kude okuphakathi kwezona zixhobo kukukhusela ukusasazeka kwesi sifo.